UTroughton usezule waze wabuyela 'ekhaya' kumaTuks
UTroughton usezule waze wabuyela ‘ekhaya’ kumaTuks
July 4, 2021 Impempe.com
Uqweqwe lomqeqeshi, uSammy Troughton, selubuyele eqenjini lalo elidala i-University of Pretoria elisebenze kulo isikhathi eside phambilini.
Lokhu kumenyezelwe yiTuks kuleli viki ngesitatimende lapho iveze khona ukuthi uTroughton uqashwe njengenhloko yosomaqhinga kuleli qembu lasePitoli. Lo mqeqeshi useqeqeshe amaqembu amaningi kwiGladAfrica Championship.
UTisane Motaung, okuvela ukuthi ube nesandla kakhulu ekubuyiseni uTroughton, usazoqhubeka nokuba ngumqeqeshi. Umsebenzi kaTroughton kuzoba ukubhekelela inkulisa nokukhombisa indlela umqeqeshi nethimba lakhe labaqeqeshi.
“Eminyakeni engu-21 edlule ngalethwa ukuthi ngihole iqembu lebhola kwiTuks, ngakho kuyintokozo ukubuyela lapha. Sengiqeqeshe amaqembu amaningi ezweni lonke.
“Sengibe seThekwini, eKapa, Mpumalanga, Free State kodwa ngingasho ngokungangabazi ukuthi ayikho indawo efana nakwiTuks ngokuhleleka,” kusho uTroughton esitatimendeni.
“Umsebenzi wami ulula kakhulu. Sidinga ukuzikhiqizela thina abadlali bese abaningi sibanyusele eqenjini elikhulu, kunokulanda abaningi ngaphandle. Yinto ebisisebenzelile phambilini leyo ngakho asikho isizathu sokuthi singabuyeli kuyo.
“Ngiyajabula kakhulu ukusebenza noMotaung futhi ngiyajabula ngalokho esingakuzuza sisobabili, ngokubambisana nabanye abaqeqeshi abakhona eqenjini.”
FUNDA NALA: Engabe uthule nje uphezu kwamaphi amaqhinga uMaMkhize ngecala lakhe?
UMotaung naye uzwakalise ukujabula kakhulu ngokuthi uzosebenzisana nalolu qweqwe lomqeqeshi. Uthe ukungalali endleleni kukaTroughton uma kuziya ekubekeni into injengoba injalo yikho okumchaza kakhulu.
“Kuyangithokozisa kakhulu ukubuya kukaSammy kwiTuks ngoba akayena nje umuntu oqondayo ukuthi kwenzekani eqenjini kodwa ungumuntu oyisho njengoba injalo into. Akalokhu egwegwesa. Ngicabanga ukuthi sizosebenza kahle ngokubambisana.
“Ngidlalile ngaphansi kwakhe ngiseyisitshudeni futhi ufake isandla kakhulu ekutheni ngenza kanjani njengomqeqeshi. Ngakho sikuqonda kahle kakhulu ukuthi sizosebenza kanjani,” kusho uMotaung.
UTroughton useqeqeshe amaqembu afana ne-Orlando Pirates, Mpumalanga Black Aces, Nathi Lions, Vasco da Gama, Free State Stars, Witbank Spurs ne-University of Pretoria. Muva nje nguye osize ngesikhathi kuvuselelwa iPretoria Callies ayisuse kwi-ABC Motsepe League wayifaka kwiGladAfrica Championship.
Previous Previous post: Baphoxa kubhekwe lukhulu kubo kwiPirates laba
Next Next post: AbeRoyal AM bafuna uMato Madlala ayobhadla ejele